Shiinaha 1350KG, 1500KG Nooca Soosaarayaasha Nidaamka Magnetic Formwork iyo alaableyda | Meiko Magnetics
1350KG ama 1500KG Nidaamka Qaabaynta Magnetic sidoo kale waa nooca awoodda korantada ee hagaajinta saxanka plateform shaashadda, kaas oo si aad ah loogu talinayo in loo isticmaalo hagaajinta sidemould ee sanduuqyada sanduuqa precast la taaban karo. Waxay si fiican ugu habboonaan kartaa shaqada birta ama alwaaxa looxyada laga sameeyo, oo leh adapters kala duwan ama boolisyo riixaya.
Ka dib marka la riixo badhanka, magnets-ka sanduuqa ayaa miiska si adag u haya. Way fududahay in lagu nadiifiyo saxanka birta ee saxanka alwaaxda leh ciddiyo. Waxaa lagu dhaqaajin karaa adigoo si fudud hoos ugu riixaya badhanka gacanta ama cagta. Si loo baabi'iyo, magnets-ka waxaa si fudud u sii daayay lever bir ah (si uu u jiido batoonka). Meesha aan firfircooneyn, magnets magnetka ayaa si fudud looga saari karaa foomka miiska. Magnets la taaban karo precast loo isticmaali karaa keligiis ama ku xiran adpator si loo hagaajiyo qaab. Caadi ahaan 1350Kg magnet sanduuqa xoogga ee toosan ayaa si fiican ugu habboon 80-150mm dhumucda waxsoosaarka derbiga. Sidoo kale, waxaan awoodnaa inaan soo saarno awood kale oo magnets box ah, xitaa 2500KG, nooca 3000KG sida dalabaadkaaga ah.
Khibradayada hodanka ah ee mashaariicda la taaban karo ee soo socda awgeed, annaga, Meiko Magnetics, waxaan awood u leenahay inaan naqshadeynno oo soo saarno dhammaan xalalka magnetka ee warshad canaasado walxaha waaweyn ah, iyadoo aan loo eegin birlabyada sanduuqa, magnets la galiyay, birlabta birlabta, birlabta birlabta magnetic hore ama magnetic kale nidaamyada ku jira codsiyada precast.
Hore: 900KG, 1Ton Box Magnetka Loogu Talagalay Shaxda Jilicsan ee Qaab-dhismeedka Miiska
Xiga: 1800KG Magnet Magnet leh badhanka Daar / Deyn ee Nidaamka Qaab dhismeedka Prefabricated
1.5Ton Magnet Button Awoodda
1350KG Foomka Magnet
1350KG Precast Magnet La taaban karo
1350KG Qalabka Magnet
1500KG Sanduuqa Magnetic
Nooca 1500KG ee sanduuqa magnet